လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် deontology: ဤလေးမျိုးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစား၏အခြေခံမူ, ကောင်းတဲ့အ, တရားမျှတမှုနှင့်ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစားသူတို့ကိုယ်သူတို့အကြီးအကျယ်နှစ်ခုထက်ပိုသောစိတ္တဇကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်ကနေဆင်းသက်လာကြသည်။ ကျင့်ဝတ်ကြီးစွန်းအောင်မြင်ရန်အလားအလာသိက္ခာမဲ့နည်းလမ်းများသုံးပြီး: ကသငျသညျကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့အကြောင်းကိုတဦးတည်းသုတေသနကျင့်ဝတ်အတွက်အခြေခံအကျဆုံးတင်းမာမှုများ၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် enable လိမ့်မယ်ကြောင့်ဤမူဘောင်ကိုနားလည်ခြင်းအထောကျအကူဖြစ်ပါတယ်။
ဂျယ်ရမီ Bentham နှင့်ယောဟန် Stuart Mill ၏လုပျငနျးအတွက်အမြစ်များရှိပြီးဖြစ်သောလက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, ကမ္ဘာပေါ်မှာပိုကောင်းပြည်နယ်များမှဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းလုပ်ရပ်များယူပြီးအပေါ်အလေးပေး (Sinnott-Armstrong 2014) ။ ဟန်ချက်ညီအန္တရာယ်နှင့်အကျိုးအမြတ်အပေါ်အာရုံစိုက်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့အ, ၏နိယာမ consequentialist စဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက်နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဧမာနွေလ Kant ၏လုပျငနျးအတွက်အမြစ်များရှိပြီးဖြစ်သော deontology, သူတို့ရဲ့အကျိုးဆက်များ၏လွတ်လပ်သော, ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ်အာရုံစိုက် (Alexander and Moore 2015) ။ သင်တန်းသားများကို၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပေါ်အာရုံစိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစား၏နိယာမ, နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း deontological စဉ်းစားတွေးခေါ်အမြစ်တွယ်နေပါတယ်။ နှစ်ခုမူဘောင်ခွဲခြားရန်တစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရေနံစိမ်းလမ်း deontologists နည်းလမ်းများနှင့် consequentialists ကြီးစွန်းအာရုံစိုက်အာရုံစိုက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အဲဒီနှစျခုမူဘောင်လည်ပတ်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်, အသိပေးသဘောတူညီခကျြစဉ်းစားပါ။ နှစ်ဦးစလုံးမူဘောင်သဘောတူညီချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်နိုငျသညျ။ အသိပေးသဘောတူညီခကျြအတှကျ consequentialist အငြင်းအခုံကစနစ်တကျစွန့်စားမှုနှင့်အမျှော်လင့်အကျိုးကျေးဇူးဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးတော်မမူကြောင်းသုတေသနတားမြစ်ခြင်းဖြင့်သင်တန်းသားများကိုထိခိုက်မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကသင်တန်းသားများကိုအဘို့ဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များကိုတားဆီးကူညီပေးသည်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်နည်းအားဖြင့် consequentialist စဉ်းစားတွေးခေါ်အသိပေးသဘောတူညီခကျြကိုထောကျပံ့လိမ့်မယ်။ သို့သော်အသိပေးသဘောတူညီခကျြအတှကျ deontological အငြင်းအခုံသူမ၏ပါဝင်သူများ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလေးစားရန်သုတေသီရဲ့တာဝန်အပေါ်အာရုံစိုက်။ ဤအချည်းကပ်ပေးထား, စင်ကြယ်သော consequentialist စင်ကြယ်သော deontologist မဟုတ်ငှါသော်လည်းအဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှုရှိ၏ဘယ်မှာ setting ကိုအတွက်အသိပေးသဘောတူညီခကျြအတှကျလိုအပျခလည်စေရန်ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်။
လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် deontology နှစ်ဦးစလုံးအရေးကြီးသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်ပူဇော်ပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီစိတ်ပျက်ဖွယ်အစွန်းခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ဤအစွန်းရောက်ဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးအစားထိုးဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အဘယ်သူ၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအားလုံးငါးခုကိုကယျတငျနိုငျတဦးတည်းကျန်းမာလူနာများ၏သေဆုံးငါးဦးလူနာတွေကိုသူဆရာဝန်တစ်ဦးဆိုပါစို့။ အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်တစ်ဦး consequentialist ဆရာဝန်ခွင့်ပြု-နှင့်ပါလိမ့်မည်ပင်လိုအပ်-အားမိမိကိုယ်တွင်းအင်္ဂါရရှိရန်ကျန်းမာလူနာကိုသတ်။ ကြီးစွန်းပေါ်မှာဤပြည့်စုံအာရုံ, နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲ, ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပင် deontology လည်းထိုကဲ့သို့သောအချိန်ဗုံးဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်သောအမှု၌ရှိသကဲ့သို့အဆင်မပြေအစွန်း, ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ လူတွေသန်းပေါင်းများစွာကိုသတ်လိမ့်မယ်တဲ့ ticking အချိန်ဗုံး၏တည်နေရာကိုသိရှိသူတစ်ဦးအကြမ်းဖက်ဖမ်းမိထားသူတစ်ဦးရဲအရာရှိဆိုပါစို့။ တစ်ဦးက deontological ရဲအရာရှိဗုံး၏တည်နေရာထုတ်ဖော်သို့အကြမ်းဖက်လှည့်စားနိုင်ရန်အတွက်အိပ်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ နည်းလမ်းပေါ်မှာဤပြည့်စုံအာရုံ, ကြီးစွန်းပတ်သတ်ပြီးမပါဘဲလည်းချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့တွင်အများဆုံးလူမှုရေးသုတေသီများလုံးလုံးလြားလြားကဤနှစ်ခုကိုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်တစ်ခုရောစပ်ဘက်လျက်။ ကျင့်ဝတ်ကျောင်းများ၏ဤ blending ကိုသတိပွုမိအဘယ်ကြောင့်များစွာသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံ-ပေးသောပိုပြီး consequentialist နေသောသူတို့ကိုနှင့်ပိုပြီး deontological-don't နေသောသူတို့ကိုအကြားဖြစ်လေ့ရှင်းလင်းကူညီပေးသည်အများကြီးတိုးတက်မှုစေ။ Consequentialists ယေဘုယျအားဖြင့်နည်းလမ်းစိတ်ပူနေသော deontologists မှယုံကြည်နေကြသည်မဟုတ်ကြောင်းကြီးစွန်း-အငြင်းပွားမှုများနှင့် ပတ်သက်. အငြင်းပွားမှုများကိုဆက်ကပ်။ အလားတူပင် deontologists ကြီးစွန်းပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသော consequentialists မှယုံကြည်နေကြသည်မဟုတ်သည့်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုငြင်းခုံပူဇော်လေ့ရှိကြသည်။ consequentialists နှင့် deontologists အကြားအငြင်းပွားမှုများညဉျ့အခြိနျ၌ဖြတ်သန်းနှစ်ခုသင်္ဘောများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
လူမှုရေးသုတေသီများအစိုင်အခဲကငျြ့တရား, တစ်တသမတ်တည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် deontology ၏လွယ်ကူသော-to-လျှောက်ထားရောစပ်ဖို့အတွက်ဤငြင်းခုံမှုများမှတစျခုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အဲဒီဖြစ်ပျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်င်; ဒဿနပညာရှင်တစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာသောဤပြဿနာများနှင့်အတူရုန်းကန်နေခဲ့ကြပြီ။ သို့သော်သုတေသီများသည်ဤနှစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်နှင့်သူတို့ဆိုလို-မှခန့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် trade-off ရှင်းလင်းနှင့်သုတေသနဒီဇိုင်းများမှတိုးတက်မှုများအကြံပြုလေးပါးအခြေခံမူကိုသုံးနိုင်သည်။